Semalt कसरी फाइन्सको साथ एसईओ सहसंबंधमा कोषहरूको रकम लगानीको रकम प्राप्त गर्दछ
तपाईंले एसईओमा लगानी गर्नु पर्ने कोषहरूको मात्रा भिन्न हुन्छ किनकि एजेन्सीहरूले प्रस्ताव गरेको मूल्यहरूको कारणले गर्दा हो। यद्यपि अभ्यासले देखाउँदछ कि सेवाहरूको उच्च लागतले तपाईंको एसईओ अभियानको सफलताको ग्यारेन्टी गर्दैन। के प्रारम्भिक लगानीको बृद्धि भएको लाभले प्राप्त गरेको लाभको बृद्धिसँग मेल खान्छ? के त्यहाँ कारोबारको लागि निश्चित सीमा छ र पुरस्कारहरू पुग्न पुग्न आवश्यक छ?
Semalt डिजिटल सेवाहरूको अग्रणी विशेषज्ञ निक Chaykovskiy, SEO मा लगानी मा प्रतिफल को प्रभाव कारक वर्णन गर्दछ।
रणनीतिमा खर्च गरिएको समय र पैसाको मात्राले मात्रा र मात्रालाई असर गर्दछ। कम्पाउन्डिंग अदायगी निम्नलिखित तत्वहरूको भिन्नताबाट धेरै नै प्रभावित हुन्छ। यस खातामा, यी वा केही कारकहरूको इनपुट बढाउँदा फिर्ताको वृद्धि दर बढाउँदछ।
मात्रा भनेको नियमित आधारमा गरिने कामको मात्रा हो। धेरै क्वालिटी लि links्कहरूले डोमेन अधिकार बढाउँछन्, जबकि गुणवत्ता सामग्रीले गुगलको अनुक्रमणिकामा भएका पृष्ठहरू बढाउँदछ।
क्वालिटी कार्यमा समर्पित समयको मात्रामा निर्भर गर्दछ। उच्च प्राधिकारिक स्रोतहरूले धेरै लि hosting्कहरू होस्टिंग गर्ने तल्लो श्रेणीकरण स्रोतहरू भन्दा एकल लिंकको होस्टिंग अधिक मूल्य सिर्जना गर्दछ।
समय लगानीबाट फिर्ती तत्काल हुँदैन किनभने तिनीहरू समयसँगै स्नोबल हो।
धेरै प्रतिस्पर्धी साइटहरूको साथ बजारमा अवस्थित व्यवसायमा आंशिक लगानीले कम्पनी बाहिर निकालेको जस्तो परिणाम ल्याउँदैन, जुन सामग्री मार्केटिंग रणनीतिको विकासको लागि लगानी गरिएको थियो। जहाँसम्म, त्यहाँ विकल्पहरू छन् जुन न्यूनतम बजेट र लगानी आवश्यकताहरूको साथ साइटको दृश्यता बढाउन मद्दत गर्दछ। एक कम्पनीले निश्चित बजार आला वा स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र भित्र सामग्री फैलाउन सक्छ जहाँ यसले यी क्षेत्रहरूमा लक्षित दर्शकहरूको लागि सामग्री अनुकूलित गर्दछ। परिणाम प्रदान गरिएको सामग्रीको प्रासंगिकतामा वृद्धि हुनेछ।
विचारको अर्को पोइन्ट गुणस्तरको स्तर हो जुन सामग्री रिलीज हुनु अघि सन्तुष्ट हुनु पर्छ। खराब लिखित सामग्री वा पातलो सामग्रीले पांडा पेनाल्टी ट्रिगर गर्न सक्दछ जुन खोज लाममा महत्वपूर्ण क्रमबद्धता ड्रप गर्दछ। यसले ब्रान्डको प्रतिष्ठा र वेबसाइटमा आगन्तुक ट्राफिकका साथै लिंक निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रकाशकहरूसँग कुनै सम्भावित सम्बन्धमा खतरा निम्त्याउँछ। न्यूनतम लगानीले गुणस्तर र विकासको लागि सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्दछ किनकि ब्यापार स्तर प्रतिस्पर्धामा निर्भर छ। प्रतिस्पर्धी भन्दा उच्चको स्तर निर्धारण गर्न सामग्री रणनीति आवश्यक पर्दछ जुन प्रतिस्पर्धीलाई पार गर्दछ र सामग्री मार्केटिंगमा उत्तम अभ्यासहरूको ज्ञानमा निर्भर गर्दछ।
पहिले छलफल गरिएको बिन्दुहरूलाई ध्यानमा राख्दै, हामी निम्न निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं:
प्रारम्भिक लगानीको रकम एक-ओ-एक्स एक्सचेन्जको तुलनामा बढाइएको खण्डमा व्यापारले धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्दछ
प्रतिस्पर्धाले सानो लगानीको लागि दृश्यता सीमित गर्दछ, तर पूरै यसलाई असम्भव बनाउँदैन
सामग्री र लि building्क भवनको लागि गुणस्तरको निश्चित सीमा प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्दछ कि व्यवसायहरूले गति प्राप्त गर्दछ
निष्कर्षमा, एसईओ एक सबै वा केहि रणनीति होइन कि सम्पूर्ण मार्केटिंग रणनीति महत्वपूर्ण प्रभाव देख्नको लागि माग गर्दछ। समय र प्रयास लगानी गर्नाले गुणवत्ता प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। अन्तमा, अधिक लगानीले एक बनाउँछ, उच्च परिणाम उसले / उसले उत्पादन दिन्छ। सानो लगानी पनि प्रभावकारी हुन्छ यदि सही तरिकाले लगानी गरियो।